Otú ndabere iPhone na mpụga ike mbanye
> Resource> iPhone> otú ndabere iPhone ka mpụga ike mbanye
"Enwere m ike ndabere m iPhone na mpụga ike mbanye? M nwere ọtụtụ narị songs na foto na iPhone. Na-atụ egwu ida ha, m kwesịrị ndabere iPhone na mpụga ike mbanye nke bụ 500GB. Otú ọ dị, adịghị m chọta ọ bụla ụzọ dị mfe iji kwado m iPhone. bụla aro ga-ekele. N'ihi! "
Mgbe ụfọdụ ma ọ bụrụ na i nwere ụfọdụ bara uru data na gị iPhone, na-ewere ya nche echiche, ị pụrụ iji ndabere iPhone na mpụga ike mbanye nke a na-adịghị emetụta virus ma ọ bụ nsogbu. Otú ọ dị, iTunes enweghị ike inyere gị ndabere iPhone faịlụ na mpụga ike mbanye. Na-ọzọ kpọmkwem, ọ dịghị ekwe ka ị ndabere iPhone music, photos, listi ọkpụkpọ, wdg na-mpụga ike mbanye.
Ndabere iPhone na mpụga ike mbanye, a-atọ ndị ọzọ na-eji ngwa dị mkpa. I nwere ike ịgbalị Wondershare TunesGo (n'ihi na Windows ọrụ) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) ndabere iPhone songs, photos, na vidiyo na ihe mpụga ike mbanye mfe. Mgbe e mesịrị mgbe ị kwesịrị eji ha, ị nwere ike mfe nweta ha edited na software na kọmputa ma ọ bụ nyefee ha ka ha iPhone ọzọ.
Ugbu a, i nwere ike ibudata ikpe mbipute nke TunesGo nkwado ndabere na mpaghara iPhone ka mpụga ike mbanye!
2 Nzọụkwụ na Ndabere iPhone na mpụga ike mbanye
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPhone na kọmputa site na iji eriri USB na
Download nri version nke TunesGo maka compute na wụnye ya na kọmputa gị. Ikwunye na mpụga ike mbanye gị na kọmputa. Jikọọ gị iPhone na kọmputa site na eriri USB na iPhone abịa na. TunesGo ga-amata gị iPhone na-egosipụta ya na isi window.
Nzọụkwụ 2. Back elu iPhone na mpụga ike mbanye
Site na isi window, ị pụrụ ịhụ niile mgbasa ozi faịlụ na ụdị na-depụtara ebe a. Na ịpị ọ bụla ihe karị, ị pụrụ ịhụ faịlụ niile a na ụdị. Na mgbe ahụ ị nwere ike họrọ faịlụ na pịa nhọrọ "Export ka Mac" ma ọ bụ "Mbupụ na My Computer". Na mgbe ahụ gị mpụga ike mbanye na ndabere iPhone faịlụ ka ya. Site ndabara, na Windows PC, na mpụga ike mbanye bụ na "My Computer". On Mac, na mpụga ike mbanye bụ na desktọọpụ.
Atụmatụ: Ugbu a Wondershare TunesGo (Mac) na-akwado akwado iPhone music, photos, videos, Voice Memos, wdg ka mpụga ike mbanye. E wezụga music, videos na photos, Wondershare TunesGo (Windows)-enye gị ohere ndabere iPhone listi ọkpụkpọ iji ihe mpụga ike mbanye.
Na-ekiri ndị Video nkwado ndabere na mpaghara iPhone ka mpụga ike mbanye